Macluumaad Weyn iyo Sirdoon Artifishal ah oo loogu talagalay maaraynta biyaha si wanaagsan | Saadaasha Shabakadda
Macluumaad Weyn iyo Sirdoon Artifishal ah oo loogu talagalay maareynta biyaha si ka wanaagsan
In yar ka hor waxaan ka wada hadalnay sida yar yar Xog weyn oo ku saabsan saadaasha hawada waxay beddeli doontaa habka loo sameeyo iyo barashada. Sidee "indhaha" ee arki kara waxa mudnaanta la siiyaa aan la dareemin. Xogta Weyn waxay si dhakhso leh u galaysaa qaybo badans, oo durba waxaa lagu dabaqayaa maareynta biyaha si ka wanaagsan. Oo ay la socdaan Sirdoonka Artificial (AI) iyo dareemayaal, waa wax socda. Waxaa la saadaalinayaa in sanadka 2025 teknoolojiyaddan ay gacan ka geysan karto maamulka iyo qeybinta biyaha, isla markaana yareyn karto daadashada biyaha 50%.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka UNESCO ay diiradda saareyso ee la xiriira biyaha, ayaa ah maareynta. Maaddaama isbeddelka cimilada uu sii socdo, iyo maamul xumada la sameeyay, waxaa lagama maarmaan ah in la raadiyo qalab awood u leh hagaajinta iyo hagaajinta geeddi-socodka. Waqtigan xaadirka ah, Xogta Weyn iyo AI waxay bilaabayaan inay arkaan iftiinka sida loo sameeyo biyo hufan oo caqli badan.
Mashruuca WatERP, oo lagu raadinayo waxtarka biyaha
WatERP, waa mashruuc oo ay maalgelisay Komishanka Yurub. Ujeeddadeedu waa raadinta xalal caqli badan oo ku saabsan kheyraadka biyaha. Sida aad arki karto (halkan guji) waa websaydh furan maaraynta hagaha mid kasta oo ka mid ah wejigiisa wareegga. Xogta iyo macluumaadka laga soo ururiyey, waxay ku jiraan wax kasta oo la xiriira qodobbada bixinta, goobaha, jadwalka daaweynta, iyo macluumaadka kale ee sharciga iyo saadaasha hawada.
Madaxa shirkadda Libelium David Gascón, oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga hydroinformatics, ayaa muujinaya taas Maareynta biyaha ayaa hadda ku saleysan xogta adduunka, laakiin runti waa inay ahaataa mid maxalli ah. Libelium waa shirkad ku takhasustay horumarinta dareemayaasha ururiya una soo dira xogta si caqliga macmalka ah uu si dhakhso leh ugu hawl galo. Erayada Gascón, cabbirada maxalliga ah, tusaale ahaan webi, halkii laga qaadan lahaa xogta 3 qodob oo kala duwan, waa in lagu sameeyaa 300 dhibcood, si dhab ah fikrad looga helo wejiga iyo indhaha, waxa ka dhaca qeybtaas wareegga.
Si tartiib tartiib ah tiknoolajiyaddan ayaa mar horeba lagu dabaqay magaalooyin sida Barcelona, ​​halkaas oo biyaha nidaamka waraabka lagu yareeyey 25%. Wax tusaya in maaraynta xogta wanaagsan ay faa iido weyn ugu jirto dhulkeena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Macluumaad Weyn iyo Sirdoon Artifishal ah oo loogu talagalay maareynta biyaha si ka wanaagsan
Tottenham Glacier ayaa ku dhalaalaysa xawaare dheereeya
Muxuu cirku buluug u yahay oo aanu u ahayn midab kale?